(၅)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား မတရားပြုကျင့်ခဲ့သည့် အမှုဖြစ်စဉ်၌ မော်လမြိုင်ခရိုင် ဒုတိယ တရားသူကြီးမှ တရားခံအား တရားသေ လွတ်ပေးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝိုင်းဝန်းကူညီ အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးပါရန်
ကလေးမိသားစုကို ချောင်းဆုံဆေးရုံသို့ ပြန်သွားခိုင်းခဲ့သည်။ ဆေးရုံရောက်သောအခါ ကလေးတန်ဆာကို ကြည့်သည်။ ပြီးလျှင် ဂွမ်းပြန်လဲပေးသည်။ စာရွက်တစ်ရွက်ပေးလိုက်သည်။ ညတွင်းချင်းရွာကိုပြန်လာပြီး မော်လမြိုင်ကို ညတွင်းချင်း ပြန်တက်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ည(၁၁)နာရီလောက်ရှိ
နေပြီ။ နာစ်မများက ကလေးကိုရော၊ မိခင်ကိုပါမေးပြီး ကလေးရဲ့တန်ဆာကို ဂွမ်းပြန်လဲပေးပြန်သည်။ ပြီးလျှင်ဆေးသွင်းပြီး ချိတ်ပေးသည်။ ကလေးမှာ အခင်းဖြစ်တဲ့ တစ်နေ့လုံး တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို လူကြီးများနှင့်အတူ လိုက်သွားနေရပြီး ခဏခဏလည်း အစစ်ဆေး၊ အမေးမြန်းခံနေရ၊ အနာကိုလည်း ဆေးထည့်ထည့်ခံနေရ၊ ဂွမ်းလဲ ခဏခဏ လဲနေရသောကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ ကုတင်ပေါ်တွင် မျော့မျော့သာရှိ တော့သည်။ ဆေးရုံမှာ တစ်ညအိပ်လိုက်ရသည်။
ကျော်ဆန်းတယောက် ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးကန်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်..
YANGON ― President Lee Myung-bak on Tuesday mourned the 17 South Korean victims ofabombing by North Korean agents in Yangon in 1983.
After meeting with Myanmarese opposition leader Aung San Suu Kyi, he visited the Martyr’s Mausoleum,amonument to Suu Kyi’s father and independence hero Gen. Aung San, amid tight security.
The attack leftatotal of 21 dead, and was aimed at assassinating then-President Chun Doo-hwan.
Lee laidawreath to pay homage to the late leader Aung San and spent some moments of silence for the victims in the bombing.
“This is the place where 17 Korean senior officials were victimized. I hope that my visit could be some sort of solace to the bereaved families of the 17 victims (in the bombing) as this is the scene of the incident that should not have ever happened in the 20th century,” Lee said.
“Suchahistory should not be repeated.”
Lee’s historic visit to Myanmar signaledathaw in relations between the two countries.
On Oct.9in 1983, then-President Chun was on an official visit to the Yangon region. Chun was due to visitaYangon mausoleum to commemorate the country’s independence hero and Suu Kyi’s father when the assassination attempt took place.
The visiting Korean president escaped from the attack as the bomb ripped through the Martyr’s Mausoleum before his arrival. But the bomb killed 17 Seoul officials, including foreign minister Lee Beom-seok, and injured 15 delegates.
After the bombing Myanmar immediately cut off diplomatic relations with North Korea, though ties were restored in 2007.
South Korea has maintained diplomatic relations with Myanmar, but the relationship has been limited due to international criticism over the country’s military dictatorship.
In 2005, the Seoul government ended its long-standing development loans to Myanmar in order to join international efforts to encourage reform in the country.
However, after Myanmar’s military leaders formally stepped down last year, democratic leaders from across the globe, include U.S. Secretary of State Hillary Clinton and United Nations Secretary General Ban Ki-moon have flocked to the country.
South Korea’s foreign minister Kim Sung-hwan also visited Myanmar earlier this month as the first Korean top diplomat to visit the country since 1985 to encourage further political and economic changes and to re-establish the relationship between the two countries.
By Song Sang-ho and Oh Kyu-wook
ကျော်ဆန်းလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ မြန်မာသတင်းစာမှာတော့ ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင်များကို အလေးပြုတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားသည်။ ကိုးရီးယားသတင်းစာမှာတော့ ကိုးရီးယားသမ္မတ ကမြန်မာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတွက် ပန်းခွေချ အလေးပြုလို့ ပါလာတယ်။
ကိုးလအရွယ် ကလေးငယ်ကို သုံးလအတွင်း ဘာမီတွန်ဆေးပြား ၄၅ ပြား တိုက်ကျွေးသည့် ကလေးထိန်းအား အရေးယူထား
ကလေးထိန်းဖြစ်သူက ကိုးလသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို သုံးလကျော်ကြာသည်အထိ ဘာမီတွန် တစ်ခြမ်း နေ့စဉ်တိုက်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန် အိမ်ရှင်မလွှေ့လွှေ့(၂၅ နှစ်) ရဲတံခွန် တာဝါ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နေသူသည် အိမ်ဖော်ဖြစ်သူ အေးပြည့်စံ (၁၄နှစ်)၏ေ ပြာပြချက်အရ ဆေးပြား ၄၅ ပြား ကုန်အောင်တိုက်ကျွေးသည့် ဖြစ်ရပ်ကို သိရသည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းကြောင့် မောင်--- မှာ ဘာမီတွန်ဆေးပြား တိုက်ကျွေးမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ကာ ပြင်ပဆေးခန်းတွင် ကုသရသောကြောင့် အိမ်ဖော်အား အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းမှုအား ကြည့်မြင်တိုင်ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ပြီး စုံစမ်းလျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါကလေး၏ မိခင်ဖြစ်သူ မလွှေ့လွှေ့က “ကျွန်မက စုနန္ဒာလွင်ကို ကလေးထိန်းအဖြစ်နဲ့ ခေါ်ထားတာ။ သူ့အပြင် အိမ်အကူအနေနဲ့ မအေးပြည့်စံလည်းရှိတယ်။ စုနန္ဒာလွင်က မအေးပြည့်စံကို ကျွန်မ မသိအောင် ငွေတစ်သောင်းပေးပြီး ရွာကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မကိုကျတော့ မအေးပြည့်စံက သူ့သဘောနဲ့သူ ရွာပြန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်။ ပြီးတော့ သူလုပ်ထားတာကို သူမလုံတော့ ကျွန်မ ကိုစင်ကာပူသွားပြီး သင်တန်းတက်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုပြီး ဧပြီလထဲမှာပဲ အလုပ်ထွက်သွားတယ်။ နောက် မအေးပြည့်စံက အလုပ်မရှိလို့ ကျွန်မဆီကို ပြန်လာပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ လာပြောတော့ ကျွန်မက ဘာလို့ခဏခဏပြန် လိုက်သွားလိုက်လုပ်တာလဲ မေးတော့ မှသူ့သဘောနဲ့ပြန်တာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီ အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးက ပြန်လွှတ်လို့ ပြန်ရတယ်ဆိုတာ အဲဒီတော့မှသိရတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးကို ဆေးတိုက်တဲ့ ကိစ္စကိုပါ သိလိုက်ရတာ။ ကျွန်မသိသိချင်းပဲ သူ့ကို သွားမေးတော့သူ က သူ မလုပ်ဘူး။ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ဆေးစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်၊၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေး က ညဘက်ဆိုရင် ခဏခဏနိုးတော့ သူအိပ်ရေးပျက်မှာ စိုးတာနဲ့ ကလေး ကိုဆေးတိုက်ပြီး သိပ်တာလို့ မအေးပြည့်စံပြန်ပြောလို့ သိရတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
လွှတ်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဌဦးအောင်သိန်းလင်းရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်မှာ ဆန္နပြနေကြတဲ့စက်ရုံတွေရှိရာကိုသွားရောက်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါ
အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည်
အာဆီယံ ပူးပေါင်းအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (ASEAN IntergovernmentalCommission on Human Rights, AICHR) က ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန် ၃ ရက်နေ့မှ ၆ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၎င်း၏ ၆ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပမည်ဟုအာဆီယံ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များကဒေသအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက် (ASEAN Human RightsDeclaration, AHRD) မူကြမ်းကို အပြီးသတ် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရသည်။၎င်းမူကြမ်းကို အာဆီယံနိုင်ငံ အသီးသီး မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများထံသို့တင်ပြမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအစည်းအဝေးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်မှစ၍ပထမဆုံးကျင်းပသည့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်သည်။
သတင်း.... သီဟမောင်မောင် (ပြည့်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်)
ဌာနဆိုင်ရာ တခုနှင့်တခု အပြောင်းအရွှေ့တွင် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ဒု-သမ္မတ ညွှန်ကြား
၂၀၁၂ မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Reform Strategy ရှင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက စစ်ဘက်မှ အရပ်ဘက်သို့ ကူးပြောင်းလာသူများ(သို့) ဌာနဆိုင်ရာ တခုမှတခုသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသူများအား ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲစနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးပြီး ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ ရာထူးခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဝက်ဆိုဒ်၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်မှ အောက်ခြေအထိ ဆက်ဆံပုံ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံများကို ပြောင်းလဲရန်ရှိက ပြောင်းလဲကြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သာမန်အားဖြင့် အောက်ခြေမှ တက်လာသော ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွင်ပြောရန် မရှိသော်လည်း ကြားမှဖြတ်ဝင်လာသော ပုဂ္ဂိုလ် များ ရှိလာပါက မူလဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနိုင်သည့်အတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများလည်း အထိုက်အလျောက် ကျဆင်းနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ ကြောင့် မိမိခန့်ထားလိုသူရှိပါက အရည်အသွေးကို သိရှိနိုင်ရန် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက် ခမ်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမည့် စီမံချက်မူကြမ်းကို ယခုလကုန်အပြီးတွင် ဆောင်ရွက်တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင် မူဝါဒနှင့် ကြီးကြပ်မှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့တွင် အတွေ့အကြုံအားနည်းသည့်သဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအပိုင်းတွင် ခက်ခဲ နိုင်ကြောင်း၊ သေချာလေ့လာလိုက်စားပါက အရည်အသွေးတက်လာနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ကျင်းပခဲ့သည့် Reform Strategy ရှင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင်၎င်းမှ ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဝန်ကြီးဌာနများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဦးစီးဌာနများဖောင်းပွနေမှုရှိမရှိ၊ လေလွင့်မှုများ ရှိမရှိ ပြန်ကြည့်ရန်လိုအပ် ကြောင်း၊ ပြုပြင်ရန် လိုမလို၊ လက်ရှိအတိုင်း သွားရန် လိုမလို စဉ်းစားဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ပြုပြင်ရန်ရှိက အမြန်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း ဆိုသည်။
ယင်းစည်းဝေးပွဲအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းအပါအဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား Political Reform, Administration Reform, Economic Reform, Social Reform စသည့်ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက် သွားရန် ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယာ သမ္မတ အီမြောင်ဘတ် နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပြီးအာဇာနည်ဗိမာန်ကိုသွားရောက်ဂါရဝပြု
အာဇာနည်ဗိမာန်ကိုသွားရောက်ဂါရဝ ပြုတဲ့ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ
နဝရတ်ဟိုတယ်ကို ဦးနေဝင်းမိသားစုဝင်များ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြန်ရ
၁၉၉၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ပထမဆုံး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဟိုတယ်များ၌ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်-အင်းစိန် လမ်းမပေါ်ရှိ နဝရတ်ဟိုတယ်ကို ကွယ်လွန်သူ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း ဦးနေဝင်း၏ မိသားစုဝင်များ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ သမိုင်းလမ်းဆုံအနီး ပါရမီလမ်းထောင့် အင်းစိန်လမ်း အမှတ် ၂၅၇ တွင်ရှိသော ယင်းဟိုတယ်ကို ယခုအခါ ပိုင်ရှင်ဟောင်းများက အမိုးအကာပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်မှာ တစ်လနီးပါးမျှရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းဟိုတယ်တာဝန်ခံက ပြောကြားသည်။
ယခင်ပိုင်ရှင်များပင် ပြင်ဆင်မှုလုပ်နေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားပိုင် ဖြစ်မည်၊ မဖြစ်မည်ကို မသိရသေးကြောင်း၊ ဟိုတယ်ကို ပြန်ဖွင့်မည်မှာ သေချာကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရန်ကုန်ဇုန်) တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပိတ်ပင်ထားသော ဟိုတယ်များကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်ပြီး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးခဲ့ရာ ယခင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးနေဝင်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာခင်စန္ဒာဝင်းပိုင်း နဝရတ်ဟိုတယ်သည်လည်း တစ်လုံးအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ သိရှိရသည်။ ယင်းနဝရတ်ဟိုတယ်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆင့်မြင့်ဟိုတယ် ၁၀ ခုတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး Yahao! Travels Website စာမျက်နှာတွင် Average Overall Rating ရမှတ်မှာ ဝန်ဆောင်မှု ၃ မှတ်၊ သန့်ရှင်းမှု ၃ မှတ်၊ တည်နေရာ ၁ မှတ်နှင့် ဈေးနှုန်းတန်ဖိုး ၂ မှတ်ရထားသည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, May 14, 2012
မန္တလေးတိုင်း ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် သမန်းကုန်း ရပ်ကွက် NLD ပါတီဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ အခမ်းအနား အပြီး ဦးအုန်းကြိုင် က အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
NLD ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးအုန်းကြိုင၊် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်တို့ဟာ NLD ပါတီ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲတွေကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ မကြာခင်မှာ ရပ်/ကျေးအဆင့်ကနေ ဗဟိုအထိ NLD ပါတီ ညီလာခံတွေ စတင်ကျင်းပမယ့် ကိစ္စနဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့ အကြောင်းတွေကို လိုက်လံ ရှင်းပြနေကြောင်း သိရပါတယ်။